Amazon ရှိပဲ့တင်သံနှင့် Alexa | Gadget သတင်း
Amazon Echo နဲ့ Alexa တို့နဲ့တွဲဖက်ရမယ်
Jose Rubio | | နေအိမ်အလိုအလျောက်, နေအိမ်
ယခုအချိန်အတန်ကြာလျှင်ခုန်ပျံကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သည် စမတ်ပီ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသံ၊ အသံနှင့်ရိုးရှင်းသောတေးဂီတကိုပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ရန်အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အသံချဲ့စက်သို့မဟုတ်အသံကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်းမှ၊ အင်တာနက်ကိုဆက်သွယ်ခြင်းမှမည်သည့်စုံစမ်းမှုကိုမဆိုပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုထားသည်။ အိမ်ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းထားပါ။ ဂူဂဲလ်မူလစာမျက်နှာနှင့်ဂူဂဲလ်ပင်မစာမျက်နှာအပြင်အခြားအိမ်များတွင်ပါ ၀ င်ရမည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများမှာသေချာသည် ပဲ့တင်သံအကွာအဝေးအမေဇုံ။
၎င်း၏အသံလက်ထောက် Alexa သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘဝအသက်တာကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေများကိုပေးသည်။ ၎င်းကိုဖြန့်ချိသည့်နေ့တွင်သင်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပြီးဖြစ်သည်သူတို့ကိုဘယ်တော့မှမမေ့သင့်ဘူး။ သင့်မှာ Amazon ရဲ့စပီကာတစ်လုံးရှိပြီလား၊ ဒါမှမဟုတ်ရရှိနိုင်တဲ့မော်ဒယ်သုံးမျိုးကို ၀ ယ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင် Blusens မှာငါတို့စုစည်းထားတယ်။ ထုတ်ကုန်နှင့် gadget ၉ ခုရွေးချယ်နိုင်သည်, သုံးအမျိုးအစားခွဲခြား, အမေဇုံပဲ့တင်သံနှင့် Alexa နှင့်လိုက်ဖက်သည်သင်၏အသက်တာကိုအနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ယခု ၀ ယ်နိုင်သည်။ ငါတို့နှင့်အတူလိုက်နိုင်မလား?
ပထမဦးဆုံးအရာ ကျနော်တို့အကောင့်သို့ယူရမည်ဖြစ်သည် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အပြင်ငါတို့ဂေဟစနစ်ကိုထည့်ချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းတွေကိုရွေးချယ်တဲ့အခါ \_ t သူတို့အသုံးပြုတဲ့ဆက်သွယ်မှုအမျိုးအစား။ အကျယ်ပြန့်ဆုံးဆက်သွယ်မှုအမျိုးအစားသည် Bluetooth or ကို သုံး၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် router ကို access point တစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုသည် ဝိုင်ဖိုင် တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရေးသည်။ ဒီဆက်သွယ်မှုအစီအစဉ်အလွန်ဖြစ်ပါတယ် အသုံးဝင်ရိုးရှင်းကျွန်ုပ်တို့တွင်ပစ္စည်းအနည်းငယ်သာရှိပြီး၎င်းသည်တတ်နိုင်သောဖြေရှင်းနည်းကိုရှာလျှင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အဝအသုံးပြုနိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ကိုပိုမိုလေးနက်သောပုံစံဖြင့်သိမ်းဆည်းလိုပါက Zigbee သို့မဟုတ် Z-Wave ကဲ့သို့သော protocol များကိုအသုံးပြုရမည်။
၎င်းသည်သင့်အတွက်တရုတ်လိုအသံဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်မတူညီသောကိရိယာများကိုနားလည်သောဘာသာစကားကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။ Amazon Echo သုံးမျိုးထဲက Echo Plus သည် Zigbee ကိုသာထောက်ပံ့သည်အကယ်၍ ဒေတာစီးဆင်းမှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ router အားမလွှဲမရှောင်ဖြတ်သန်း။ ပိုမိုစိတ်ချရသော၊ လုံခြုံ။ မြန်ဆန်သောဆက်သွယ်မှုကိုရရှိလိုပါက Echo Plus ကိုရွေးချယ်သင့်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤပရိုတိုကောကိုအသုံးပြုလိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အကွာအဝေးအတွင်းအမြင့်ဆုံးမော်ဒယ်ကိုရယူရလိမ့်မည်၊ အခြေခံအိမ်တွင်းတပ်ဆင်မှုအတွက်သော်လည်း၊ WiFi နှင့် Bluetooth ဆက်သွယ်မှုများသည်တစ်နေ့တာအတွက်လုံလောက်ပေလိမ့်မည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ကို domotizing သို့မဟုတ်စမတ်ပီဖြစ်သည့်ဂေဟစနစ်ကိုတိုးချဲ့ရန်နှင့်ပတ်သက်လျှင်စတင်ရန်ကောင်းသောအချက်မှာ smart မီးသီးများ။ အသုံးပြုရအလွန်လွယ်ကူသောဖြစ်ခြင်းအပြင်, သူတို့ကဖြစ်ကြသည် တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီး configure လုပ်ရန်ရိုးရှင်းပါသည် ပြီးတော့အားလုံးအထက်မှာသူတို့ရှိသည် တတ်နိုင်လောက်သောစျေးနှုန်း သင့်ဝယ်ယူမှုကိုကျွန်ုပ်တို့မရပ်တန့်ပါစေနှင့်။ စမတ်မီးသီးတစ်လုံး ၀ ယ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲထားရပါမည်။ ၎င်း၏နောက်ဆုံးနာမည်ကအလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးပုံမှန်မီးလုံးနှင့်လုံးလုံးကွဲပြားခြားနားလိမ့်မည်ဆိုသော်လည်း၎င်းသည် LED မီးလုံးဖြစ်နေဆဲ ဖြစ်၍ ထို့ကြောင့်ယေဘုယျရှုထောင့်များကထည့်သွင်းစဉ်းစားရလိမ့်မည်။ အတူတူပါပဲ ဘဝသံသရာများ၊ ပါဝါ၊ ချုံသို့မဟုတ်ချည်အမျိုးအစားနှင့်အရောင်အပူချိန်.
ချိတ်ဆက်ထားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စပီကာမှကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအချက်အချို့ကို ပြောင်းလဲ၍ ပြုပြင်နိုင်သည်။ အသံအမိန့်ဖြင့်ထုတ်လွှတ်သောအလင်း၏အရောင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ အလင်းထွက်ရှိမှုတိုးခြင်းသို့မဟုတ်လျော့နည်းစေခြင်း၊ ၎င်းကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းကိုပရိုဂရမ်အပြင်အခြား variable များကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကျနော်တို့အကြံပြုပထမ ဦး ဆုံးစမတ်မီးသီးအမှတ်တံဆိပ်ကနေဖြစ်ကြသည် Lifxအထူးသမော်ဒယ်များ Mini နဲ့ A60. လအနည်းငယ်အကြာကျနော်တို့ကသူတို့ကိုကြိုးစားခဲ့ပြီးပြီ, ငါတို့သည်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြ၏။ သူတို့ကို Amazon အတွက်ရှာနိုင်သည် € 20 ထက်လျော့နည်း, သူတို့သည်သင့်အားစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အိမ်၏အလိုအလျောက်အလိုအလျောက်ကမ္ဘာသို့စိတ်ကူးကောင်းသည့်တံခါးပေါက်တစ်ခုပေးလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ခြေလှမ်းတက်ပြီးနှင့်ရောက်ရှိခဲ့သည် Xiaomi အားဖြင့်နေ့လည်။ Xiaomi မှာသူ့မှာစမတ်မီးလုံးမရှိဘူးလို့သင်တကယ်ထင်ခဲ့တာလား။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ပုံစံကိုရရှိနိုင်ပါသည် မျိုးကွဲ (၂) မျိုး - RGB၊။ ဤနောက်ဆုံးဗားရှင်းသည်အဖြူရောင်ဖြင့်အလင်းထုတ်လွှတ်ပြီးအရောင်အပူချိန်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာချိန်ညှိပေးနိုင်သည်။ သူတို့ကို Amazon မှာရှာတွေ့နိုင်တယ် € 24 အကြောင်းကို ဗားရှင်းနှစ်ခုစလုံးတွင်၎င်းကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်စေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပိုမိုအသိအမှတ်ပြုအမှတ်တံဆိပ်ကိုသွားလျှင်၊ Philips က Hue. သူတို့ရရှိနိုင်ပါတယ် ရုံ€ 20 ကနေအမေဇုံအပေါ် တစ် ဦး ချင်းစီအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသော၌တည်၏ နှစ်ခုသုံးခုနှင့်လေးမီးသီး၏ထုပ်ထို့ကြောင့်ဝယ်ယူချွေတာ။ တစ်ခုတည်းသောပေမယ့်ဒီစမတ်မီးသီးအကြောင်း Zigbee protocol ကိုအသုံးပြုပြီးအလုပ်လုပ်သည်, ဒါ Amazon Echo Plus လိုတယ် သူတို့ကိုအလုပ်လုပ်စေနိုင်ဖို့, ဒါမှမဟုတ် တံတားနှင့်အတူတစ် ဦး ကိရိယာအစုံကိုဝယ်ကြလော့, ရန်စျေးနှုန်းမြင့်တက် € 80 ကျော်.
နောက်ဆုံးမီးသီးများ၏စည်းကမ်းချက်များအရအခြားအကြံပြုထားသည့်အခြားဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုမှာနောက်ဆုံးဖြစ်သည် TP-Link အားဖြင့်စမတ်မီးသီး။ ၎င်းတွင်ရရှိနိုင်သည် အမျိုးမျိုးသောမော်ဒယ်များ, အဘယ်သူ၏ခြားနားချက်အလင်း output ကိုနှင့်အလင်းအရောင်တည်ရှိသည် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ယူရို ၃၀ မှ အမေဇုံမှာ, သူတို့က WiFi နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ထို့ကြောင့်အချက်အချာသို့မဟုတ်တံတားတစ်ခုရှိရန်မလိုအပ်တော့ဘဲယင်းကိုအသုံးပြုရန်လွယ်ကူစေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ကိုအလိုအလျောက်စတင်ချိန်တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အခြားကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် စမတ် plug ကို။ သူ့ကြောင့် အသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်းနှင့်စျေးနှုန်းနိမ့်သို့မဟုတ်၎င်းတို့သည်စမတ်မီးသီးများနှင့်အတူလိုက်ပါရန်အခြားအထူးအကြံပြုထားသည့်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခွင့်ပြုပါ ကျနော်တို့ချိတ်ဆက်သော device ကိုထိန်းချုပ်ရှိသည် သူကနာရီကိုနာရီပေါင်းများစွာပိတ်ထားနိုင်သလိုပရိုဂရမ်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် အိမ်အပြင်ဘက်မှပင်သူနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည်.
ထွက်ခွာခြင်းမရှိဘဲ TP-Link ကို, ငါတို့ရရှိနိုင်ပါပြီ အကြောင်းကို€ 100 ကနေ HS22 အမေဇုံအပေါ်။ ငါတို့မှာရှိတယ် နှစ်ခုဗားရှင်း: အများဆုံး အခြေခံ ဒါဟာခွင့်ပြု သင်၏မိုဘိုင်းမှလည်းကောင်း၊ Alexa မှတစ်ဆင့်လည်းကောင်းဆက်သွယ်ပါWiFi ကနေတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်မှုလုပ်တယ်။ lပိုမိုစျေးကြီးသောရွေးချယ်မှုသည်စားသုံးသောစွမ်းအင်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည် အဲဒါကိုချိတ်ဆက်သည့်ပစ္စည်းအားဖြင့်။ အပျက်သဘောဆောင်သောလက္ခဏာလော။ ၎င်း၏အမြောက်အများ, ဒီဟာကဈေးကွက်ထဲမှာအသေးငယ်ဆုံးတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးသိုမဟုတ်အချို့ကိစ္စများတွင်တပ်ဆင်ရန်နေရာအလုံအလောက်မရှိပါ။
ကိုယ်ပိုင် အမေဇုံ Alexa နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ဂေဟစနစ်ကိုတိုးချဲ့နိုင်ရန်အတွက်၎င်းသည်၎င်း၏ smart plug ကိုပေးထားသည်။ ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။, ပေါင်း က TP-Link ကိုမော်ဒယ်ထက် bulkier ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဝိုင်ဖိုင်မှတစ်ဆင့်အလုပ်လုပ်သည်, ထိုခွင့်ပြု အလိုအလျောက်ချိတ်ဆက် disconnect နှင့်ပရိုဂရမ် ကချိတ်ဆက်သည့်ပစ္စည်း။
ကျနော်တို့ကဆံပင်ကောက်ကောက်ချင်လျှင်, မင်္ဂလာပါ MSS425 ကိုကမ်းလှမ်းသည် စမတ်ပါဝါချွတ်ခြင်းသို့မဟုတ်မျိုးစုံ socket ၎င်းသည်ပစ္စည်းမျိုးစုံရှိပြီး၎င်းတို့ကိုအလွယ်တကူထိန်းချုပ်လိုသူများအတွက်အကြိုက်ဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လာလိမ့်မည်။ WiFi ကနေတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်သည်ဒါကြောင့် Alexa နဲ့အလုပ်လုပ်တာအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းကထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။, ပေါင်း USB port တွေရှိတယ် မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်တွေကို power strip ကနေတိုက်ရိုက်အားသွင်းလို့ရတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အိမ်ကို domotizing လုပ်တဲ့အခါထည့်သွင်းရလွယ်ကူတဲ့အရေးကြီးတဲ့ element ကaဖြစ်တယ် လုံခြုံရေးကင်မရာစနစ်။ သူတို့ပေးသောတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုသည်သံသယရှိစရာမလိုပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့အိမ်မှဝေးသွားလျှင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့အိမ်၌ဖြစ်ပျက်သောအရာကိုထိန်းချုပ်ပါ။ ရုပ်ပုံတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်ကနေကြည့်လို့ရတယ်။
Heron ကမ်းလှမ်းသည် အားဖြင့် € 40 ထက်လျော့နည်း၎င်း၏ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောကင်မရာမော်ဒယ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်အတွင်း၌ဖြစ်ပျက်နေသောအရာများကိုစောင့်ကြည့်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် နှင့် resolution 720p, တစ်ခုရှိသည် ကြည့်ရှုထောင့်75º, အိမ်သုံးအတွက်လုံလောက်သောဖြစ်ခြင်း။ ဒေါင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက်လှည့်ပါ။ ပုံတွင်သိုထားသည် SD ကဒ် 128Gb အထိရှိသည် နှင့်ဆက်သွယ် ဝိုင်ဖိုင်မှတစ်ဆင့်မည်သည့်မိုဘိုင်းပစ္စည်းနှင့်မဆို Amazon Echo ဖြင့်ဆိုလျှင်၎င်းကိုအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
D-Link ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့အဆင့်မှာသူ့ရဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ကင်မရာကိုပေးထားတယ် DCS-8000LH။ နှင့် ကြည့်ရှုနိုင်သည့်ထောင့်နှင့် Wifi ဆက်သွယ်မှု120ºလည်းအတွက်မှတ်တမ်းတင် 720pရုပ်ပုံများကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်သိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရွေ့လျားမှုအာရုံခံကိရိယာ၎င်းသည်လှုပ်ရှားမှု (သို့) အသံတစ်စုံတစ်ရာရှိကြောင်းနှင့်၎င်းနှင့်၎င်းအားသိရှိပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားမိုဘိုင်းလ်သို့အကြောင်းကြားစာပေးပို့လိမ့်မည် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းခေတ်သစ်ဒီဇိုင်း ၎င်းကိုအခြားမော်ဒယ်များထက်ပိုမိုသတိမပြုမိစေသည်။ ကျနော်တို့ကရှာတွေ့နိုင်ပါသည် ရုံ€ 50 ကျော်.
ငါတို့လိုချင်လျှင် အကွာအဝေးမော်ဒယ်၏ထိပ်, အားဖြင့် € 180 ထက်လျော့နည်း ငါတို့ Amazon မှာရှာတွေ့နိုင်တယ် la ကျော်ကြားသော Logitech တံဆိပ်မှစက်ဝိုင်း ၂။ ၎င်းသည်အခြားစမတ်ကင်မရာများထက်စျေးနှုန်းမြင့်မားသော်လည်း၊ အိမ်တွင်းနှင့်အပြင်၌နှစ်မျိုးစလုံးတပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်ယခင်မြားနှင့်မတူဘဲ။ Alexa အပြင်ဒါဟာဖြစ်ပါသည် Apple HomeKit နှင့် Google Assistant တို့ဖြင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးဆက်စပ်ပစ္စည်း mounting ဒါကြောင့်၎င်း၏နေရာချထားလုံးဝငါတို့အကြိုက်နှင့် အသံအရည်အသွေးသည် Full HD ဖြစ်သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်မိုcloud်းတိမ်၌အခမဲ့ 24 နာရီကြာသိမ်းဆည်းထားခံရ။
မင်းတွေ့ခဲ့သလိုပဲ၊ အကယ်၍ သင့်မှာ Amazon Echo ရှိရင်အဲဒါဖြစ်လိမ့်မယ် သင်၏အိမ်ကိုဤကိရိယာများဖြင့်စတင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အားလုံးကမင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ်မှာမူတည်တယ်၊ စျေးနှုန်းနှင့်အင်္ဂါရပ်များကျယ်ပြန့်ရှိပါတယ် ဒါကြောင့်သူတို့ကို ၀ ယ်တဲ့အခါသင့်လိုအပ်ချက်နဲ့အကိုက်ညီဆုံးသူတွေကိုရယူပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » နေအိမ် » Amazon Echo နဲ့ Alexa တို့နဲ့တွဲဖက်ရမယ်